Building Robotic System using BeagleBone Black, Mandalay - Online Registration - DoAttend
Building Robotic System using BeagleBone Black
01 Apr Sunday , Mandalay
Sun Singapore System Pte. Ltd. တွင် Senior R&D Engineer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဒေါက်တာရန်နိုင်အေးမှ Robotic System များတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ BeagleBoard အကြောင်းကို Building Robotic System using BeagleBone Black ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မန္တလေးမြို့ ၇၃-လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းထောင့်တွင် တည်ရှိသော Royal Mingalar Hotel ချမ်းမြသာစည်ခန်းမတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက် နေ့လယ် ၁၂:၃၀ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Dr. Yan Naing Aye
BeagleBone Black ဆိုသည်မှာ Raspberry Pi လိုမျိုး သေးငယ်ပြီး ဈေးသက်သာ၊ ပါဝါစားသက်သာတဲ့ Single-Board Computer (SBC) အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Robotic System များတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီ workshop မှာ BeagleBoard အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပြီး hardware များနဲ့ interface လုပ်ခြင်း၊ OpenCV အသုံးပြုပြီး image processing ပြုလုပ်ခြင်း၊ robotic system အခြေခံဖြစ်တဲ့ sensor/actuator တွေ ဆက်သွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် control ပြုလုပ်ခြင်း၊ အခြေခံ digital/analog input/output များ အသုံးပြုခြင်း၊ serial communication ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခြင်း စတာတွေကို ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
C++ အသုံးပြုပြီး OpenCV အသုံးပြုပုံအခြေခံနဲ့ BeagleBoard တွေပေါ်မှာ machine vision အတွက် လုပ်တောင်မှု အခြေခံတွေကို လက်တွေ့ရေးသား စမ်းသပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တက်ရောက်မယ့်သူများ အနေဖြင့် laptop များ ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ရန်နိုင်အေး သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ Nanyang Technological University (NTU) တွင် ၂၀၁၆ ၌ Robotics နည်းပညာပိုင်း ဖြင့် Ph.D. ဘွဲ့ကို ရရှိ ထားသည်။ NTU ရှိ Robotic Research Centre တွင် ၂၀၁၀ မှ စ၍ ၂၀၁၆ ထိ ၇ နှစ်ကြာ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ သုတေသနများ လုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ ယခု အခါ Sun Singapore System Pte. Ltd. တွင် Senior R&D Engineer အဖြစ် သုတေသန လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည်။
Venue: ChanMyaTharSi Hall, Royal Mingalar Hotel
Corner of 73rd & NguShweWah St., Mandalay.
Corner of 73rd St., & Ngu Shwe Wah St.